I-Nautica uyilo isitudiyo esincinci kufutshane nolwandle # 1 - I-Airbnb
I-Nautica uyilo isitudiyo esincinci kufutshane nolwandle # 1
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguYannis-Eleni
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uYannis-Eleni iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Eli gumbi lincinci lincinci elihle, elinezixhobo ze-kichen ezigcweleyo & ne-aircondicondion, kwaye i-Toroni Sithonia Chalkidiki, idolophana encinci ene-3 km ubude kunye nobubanzi obukhulu, ulwandle olunesanti olucocekileyo olufana namanzi e-crystal .Kukho indlela enkulu ecaleni kolwandle kunye nabaninzi, iindawo zokutyela, iimarike ezinkulu, ivenkile yeentlanzi, ivenkile yokubhaka, ivenkile yebucher kunye nantoni na oyifunayo. Siziimitha ezili-150 ngolona nxweme lubalaseleyo lwesanti kulo lonke elase-chalkidiki. Indawo ezolileyo kakhulu, igadi yomlingo kwaye mhlawumbi yeyona ndawo intle yokutshona kwelanga !!! Sibonelela nge-wifi yasimahla, iaircondicondiion yasimahla
Lo mhle unomhombiso wesitayela soyilo lwe-navy. Ikwenza uzive ngathi ukhwele !!! Yonke into iNtsha, iibhedi, ikhitshi, iilinen, kunye nomgangatho olungileyo. Igadi intle kakhulu kwaye indawo ithule kakhulu. Egumbini Sinenethi zokuthintela iingcongconi kuyo yonke indawo, i-wifi yasimahla kunye ne-aircondiction yasimahla.
Ummandla othule kakhulu kwindawo entle yendalo, malunga neemitha ezili-150 ukusuka elunxwemeni oluhle kakhulu nolucocekileyo lweHalkidiki. Abamelwane kwaye ngokubanzi bonke abantu basekuhlaleni banoncumo ebusweni babo, balungele ukukunika ulwazi onomdla kulo.
Umbuki zindwendwe ngu- Yannis-Eleni
Sihlala endlini enkulu egatini, nanini na ufuna ungandibuza nantoni na. Ndiya kukuvuyela ukukunika ulwazi malunga nokuhlala kwakho, malunga ne-toroni, imisebenzi njl.
Inombolo yomthetho: 00000694595
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Toroni